ဝက်ခြံပေါက်တာက အရေပြားနှင့် အရေပြားအောက်ဘက်က တစ်ရှူးတွေကို ပျက်စီးစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဒီပျက်စီးမှုကို ပြုပြင်ဖို့ ကြိုးစားပြီး ကော်လာဂျင်တွေကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ကော်လာဂျင်အနည်းငယ်သာ (သို့) အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ပါက အမာရွတ်တွေကို ပေါ်လာစေပါတယ်။ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ နည်းလမ်းများစွာ ရှာတွေ့နိုင်သော်လည်း ဒါကို ကုသဖို့အလွယ်ဆုံးနဲ့ သဘာဝ အကျဆုံနည်းလမ်းက ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရသာရှိပြီး ကျန်းမာသော...
နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ပန်းရောင်သန်းပြီး ကျန်းမာစေဖို့အတွက် အလှအပသိကောင်းစရာများ
ပန်းနုရောင်နှုတ်ခမ်းတစ်စုံက ပျိုမေတို့ရဲ့မျက်နှာကို တောက်ပစေပြီး အပြုံးကို နွေးထွေးစေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ပန်းရောင်သန်းခြင်းက ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နှုတ်ခမ်းလေးတွေ ကျန်းမာနေအောင် သင့်တော်တဲ့ ဂရုစိုက်မှုတွေ ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှုတ်ခမ်းဟာ မျက်နှာမှာ အနူးညံ့ဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆီဂလင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နူးညံ့ပျော့ပျောင်းနေဖို့ ပြင်ပအစိုဓါတ်က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ၁။ နှုတ်ခမ်းကို အစိုဓါတ်ထိန်းပေးခြင်း နှုတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း၊...
ရေမွှေးဆွတ်တဲ့အခါ မွှေးရနံ့ကြာရှည်ခံအောင် ဘယ်နေရာတွေ ဆွတ်မလဲ?
ရေမွှေးဆွတ်တဲ့အခါ တစ်ချို့က အဝတ်အစားပေါ်မှာဆွတ်ကြသလို မွှေးရနံ့လေးစွဲနေအာင် တစ်ချို့က သွေးခုန်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ဆွတ်တတ်ကြပါတယ်။ ရေမွှေးကို သွေးခုန်နေတဲ့နေရာတွေအပြင် သမားရိုးကျမဟုတ်တဲ့ တခြားနေရာပေါ်မှာဆွတ်ရင်လည်း အံသြဖွယ်ကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ၁။ ဒူးကောက်ကွေးနေရာမှာ ဖြန်းပါ အများစုက လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်မှာ ဆွတ်လေ့ရှိပေမယ့် ဒူးအနောက်မှာ ဆွတ်တယ်ဆိုရင် နည်းနည်းထူးဆန်းနေပုံရပါလိမ့်မယ်။ ဒူးကောက်ကွေးမှာ သွေးခုန်တဲ့နေရာရှိပါတယ်။ ရလဒ်ပိုကောင်းအောင် ရေချိုး၊ လိုးရှင်းလူးပြီးမှ ရေမွှေးကို ဆွတ်ပေးပါ။...
ကျွန်မတို့လက်တွေက ပြောပြနေတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ (၉)ခု
ကျွန်မတို့လက်တွေက ကျွန်မတို့ထင်ထားတာထက်ပိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့က ကျွန်မတို့ခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအကြာင်းကို ပြောပြနေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့သတိမထားမဘဲ ခံစားနေရနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ ကိုးခုအကြောင်းကို ပြောပြနိုင်တဲ့ ဒီနိမိတ်လက္ခဏာတွေကို သတိပြုရပါမယ်။ ၁။ လက်မနှင့် လက်ညိုး နာကျင်မှု သင့်လက်မနှင့် လက်ညိုးနှစ်ခုစလုံးမှာ တရွရွဖြစ်ခြင်း၊ ထုံခြင်းအပြင် နာကျင်မှုကြုံတွေ့ရလျှင် (carpal tunnel syndrome) လက်ကောက်ဝတ်ရှိ အာရုံကြောတွေကို...
သံပုရာရေသည် လန်းဆန်းတက်ကြွစေတဲ့ ဖျော်ရည်တမျိုးဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တာကို လူတော်တော်များများသိကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ သံပုရာရည်သောက်သုံးပါက ရရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နို့ချိုတိုက်ကျွေးစဉ်မှာ သံပုရာရည်သောက်သုံးတာ လုံခြုံမှုရှိသလား? များသောအားဖြင့်တော့ သံပုရာရည်သောက်သုံးတာဟာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သံပုရည်သည် ရေဓါတ်ကိုဖြည့်စွတ်ပေးပြီး အစာခြေစနစ်၊ အူသိမ်ကျန်းမာရေး အစရှိတာတွေကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ဖျော်စပ်ထားတဲ့ သံပုရာရည်သည် ဈေးကွက်မှာ တင်ရောင်းထားတဲ့...
ဆံပင်ဆိုးဆေးတွေမှာ သင်လိုချင်တဲ့ ရလဒ်ကောင်း ရရှိဖို့ ဓါတုပစ္စည်းပေါင်း ၅၀၀၀ကျော်ပါဝင်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆံပင်ကို မဆိုးခင်၊ ဆိုးနေစဉ်နှင့် ဆိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ပိုပြီး ဂရုစိုက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ငွေရောင် (သို့) မဟော်ဂနီရောင်တွေက သင့်နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေပေမယ့် အရောင်ကြာရှည်ခံပြီး ဆံပင်ကျန်းမာနေစေဖို့ ထိန်းသိမ်းရပါလိမ့်မယ်။ ဆံပင်ဆေးဆိုးတဲ့အခါ ကုန်ရကျိုးနပ်စေဖို့အတွက် ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အရာတွေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့မှာ ဆံသားကို ကျန်းမာစေပြီး ဆိုးထားတဲ့...
ဦးနှောက်ရဲ့ ဧရိယာသို့ သွေးပံ့ပိုးမှုက လိုတာထက် လျော့နည်းသွားတဲ့အခါ(သို့) ပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် အာရုံခံဆဲလ်တွေ ပျက်စီးသွားနိုင် (သို့) သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအရာကို ရှောင်ရှားဖို့ လေဖြတ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းအချို့ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Neurology ဂျာနယ်မှ ထုတ်ဝေသော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လေဖြတ်ခြင်းကို အများဆုံးခံစားကြတဲ့ လူဦးရေအုပ်စုမှာ အမျိုးသားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း အသက်ရလာတာနှင့်အမျှ...
လူတွေရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်မှုအများဆုံးပြုလုပ်ထားတာက စိတ်ဖိစီးမှုပါဘဲ။ ဒါကိုလုပ်မှလုပ်နိုင်ပါ့မလား၊ ဒီတခုကို မှားယွင်းသွားခဲ့ရင် အစရှိတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ အစပြုခဲ့တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်း၊ ဖန်တီးနိုင်မှုစွမ်းရည် အစရှိတာတွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးသလိုဖြစ်စေပြီး လုံလောက်တဲ့အားအင်တွေ၊ ရရှိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းတွေကနေ သွေဖယ်သွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို တွန်းလှန်ဖို့နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေဖို့အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆန့်ထုတ်ခြင်း ခန္ဓာကိုယ်ကို နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာဆန့်ထုတ်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်တာက ကြွက်သားတွေကို...